Business Development / Marketing Manager | City College Yangon
- This position requires contacting people in other schools, colleges, tuition centers etc to promote College and STEM program. Must enjoy the process of contacting new people and developingarelationship to promote our programs. If you do not enjoy contacting people, making networks etc, you will not qualify for this position. You have to show that you have done this kind of work before.
- Follow up with the teachers and tuition teachers and others regularly to developarelationship so that they refer students to us. We will reward them for the referrals
- Local travel to visit these schools, tuition centers often is required. Few timesayear travel outside of Yangon withateam is required.
- Make marketing and business development plans and present to management.
- Regular marketing on Facebook, and follow-ups. The graphic designer will design the FB ads, but you have to provide the direction and message on the ad.
ဤရာထူးလျောက်ထားသူသည် ကျောင်းများ၊ College များ၊ ကျူရှင်များသို့ သွားရောက်၍ City College နှင့် STEM Program အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြနိူင်ရမည်။ လူသစ်များနှင့် လိုလားဆက်ဆံတတ်သူ ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းများအကြောင်းကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။အကယ်၍ သင်သည် လူအများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်းများကို အဆင်ပြေအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ဤရာထူးနှင့် သင့်တော်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ဤကဲ့သို့ အလုပ်မျိုးကို ယခင်ကလုပ်ကိုင်ဖူးခြင်းရှိကြောင်း အထောက်အထားရှိရမည်။ဆရာများ ၊ ကျူရှင်ဆရာများနှင့်အဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်၍ ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နေရမည်။ သို့မှသာ ဆရာများက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျောင်းသားအပ်နှံပေးမှုပို့ဆောင်မှုအတွက် ဆရာများအား ထိုက်တန်စွာ ချီးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
- Prior experience in Sales, Marketing or Business Development required
၁။ Sales & Marketing (သို့) Business Development တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ
၂။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ တစ်ခုခု ရရှိသူဖြစ်ရမည်
၅။ ကျောင်းများနှင့် ကျူရှင်များသို့ သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။တစ်ခါတစ်ရံ အဖွဲ့နှင့်
ရန်ကုန်ပြင်ပသို့လည်း ခရီးသွားလာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၆။ Marketing & Business Plan များကို ရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ပြီး Management Committee သို့
၇။ Facebook တွင် ပုံမှန် Post များ တင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အမြဲဆက်သွယ်နေရမည် ။ Graphic
Designer က Facebook အတွက် ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့်
အချက်အလက်များကို ကြေငြာ တွင် ထည့်သွင်းပေးရမည်။
Weekend ( Saturday and Sunday) holiday.
No micromanagement and performance evaluated based on result.
- Opportunity to promotion
- Training provided as needed after working for sometime
Business Development Manager MyWorld Careers Co., Ltd. Business Development Manager iGenesis Technologies Limited Business Development Manager Ammon Consulting (Myanmar) Co., Ltd Business Development Manager Asian Fame Media Group Business Development Manager Valentis Group Business Development Manager Robin Johnson Engineering (RJE Myanmar) Business Development Manager Yoma Strategic Holdings Ltd. Business Development Manager Mandala Company Limited Business Development Manager IGE Group of Companies Business Development Manager DHL Supply Chain Myanmar Business Development Manager SHWE TAUNG GROUP Business Development Manager TOP CAREER Myanmar